Valverde wuxuu heli doonaa, Weerarka Adduunka ugu xooggan Sanadka Dambe | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - Valverde wuxuu heli doonaa, Weerarka Adduunka ugu xooggan Sanadka Dambe
Barcelona ayaa waxay durbadiiba sii diyaarisay Safkii ugu xoogganaa ee xagaaga dambe, xataa haddii ay kooxaha kasoo horjeeda diyaar garow sameeyaan ama aysan sameyn, waxaa la arkaa in ay heysato Safka ugu weerarka Adag.
Kooxda Real ma jiraan weli waxay xaqiijisay oo dhanka Saxiixyada ah, waxaase ka rajeynayaa in Josep Maria Bartomeu uu Safkiisa kusoo dari doono Antoine Griezmann kaasoo garoonka Camp Nou lagu geynayo qiimo walba oo heshiiskiisa lagu jebin karo.
Wax badan ayaa sanadka dambe uga qabsoomi kara kooxdan horyaalka LaLiga, waayo kooxda horyaalka heysata waxay weerar u heysataa Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho iyo Ousmane Dembele.
Griezmann wuxuu dhaliyay 124 gool dhammaan tartamada 5-sano oo lasoo dhaafay, waxaana Barcelona seddaxdeeda weerar ay noqon doonaan xiddigo dhaliska aad ugu wanaagsan, xilli ay 5 ciyaartoy oo xooggan u heli doonaan Weerarka – Griezmann, Messi iyo Suarez ayaana noqon doona Weerarka Seddax Aflaha ah.
Waxaa kusii xiga in, Coutinho oo durbadiiba 6 gool u dhaliyay kooxda tan iyo markii uu January u dhaqaaqay kooxdan, iyadoo 12 kale uu usoo dhaliyay Liverpool qeybta hore ee horyaalkii lasoo dhaafay.
Dembele dhaliskiisu ma wanaagsana Sanadkan, waxaa intaas keddib Catalonia kooxda ka dhisan ay tahay mid rajo wanaagsan ka qabta inuu Sanadka dambe waxqabadkiisa xoojin doono.
Weerarka nuucaan oo kale ah, wuxuu cadaadis ba’an saarayaa Dembele kaasoo markii hore loosoo qaatay beddelka Neymar xilli Coutinho iyo Griezmann ay yihiin xiddigo kale oo aad muhiim u noqonaya.